Boqor loogu baaqay bixinta magta dadkii ay dileen Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaan Axmed Fiqi, ayaa Boqor Buurmadow, ugu baaqay inuu bixiyo diyada kumananka qof ee Al-Shabaab diileen, maadaama uu dhawaan sheegtay in Al-Shabaab beeshiisa ku matalaan qeyb ka mid ah siyaasadda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirkii hore ee amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi, ayaa noqday siyaasigii ugu horeeyay ee ka fal-celiya hadal uu dhawaan sheegay Boqor Cismaan AW-Maxamuud Maxamed [Buurmadoow], oo ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland, kaas oo maalmahaan ku sugnaa Koofurta Soomaaliya.
Buurmadoow, ayaa dhawan sheegay in koofurta Soomaaliya ay ka jirto labo dowlad, [Al-Shabaab iyo Dowladda Federaalka] isla-markaasna kaliya shaqsiyaad isaga ku qabiil ah ay xukumaan Kooxda Al-Shabaab, wuxuu naxariis u rajeeyay Axmed Gudane [Abuu Subeyr] Amiirkii hore ee kooxda xiriirka la leh Al-qaacida.
Hadalkas dad badan aya u arkay digasho iyo in Buurmadoow, uu damqinayo bulshada ay dhibaaytooyinka kala duwan u geysteen kooxda uu sheegay in qabiilkiisa hoggaamiyayaasha u yihiin, waxaana si kulul kaga hadlay Xildhibaan Axmed Fiqi.
“Boqor Buurmadow haddii uu ka samafalay dadkii Laascaanood sida aan wanaagsanayn looga soo tarxiilay, waxaa looga fadhiyaa in uu diyaariyo magdhowgii dadkii kumanaanka ahaa ee Godane iyo xarakadiisu ay laayeen”. Ayuu yiri, Wasiirkii hore ee amniga Galmudug.
Axmed Macallin Fiqi, wuxuu boqorka ku eedeeyay in aysan hadalladiisu u qiyaasneyn, isla-markaana uu sameeyay ku digasho uusan geed ugu soo gamban, isagoo iska indha tiray ilaalinta dareenka dhibanayaasha.
“Hadalkaas, waxaa loo qaadan karaa ku digasho iyo in aysan boqorka u qiyaasnayn xajmiga kalimadaas ay leedahay iyo saamaynta xun ee ay ku reebeyso dadka ay dhibaataysay argagixisada iyo hogaamiyahooda uu naxariista u muujiyey”. Ayuu yiri.
Fiqi, wuxuu sheegay in Buurmadoow arki waayay maamuuska sare ee loo sameeyay, wuxuuna ugu baaqay in “Boqorku hadalkaas cudurdaar ka bixiyaa, iskumana qalanto sida loo maamuusay iyo boogaha uu damqiyey”!
Cismaan AW-Maxamuud Maxamed [Buurmadoow], ayay si weyn odayaasha dhaqanka beelaha Koofure, u soo dhaweeyeen, waxaana caasimadda loogu sameeyay ku dhawaad 10 munaasabadood oo waaweyn.